Fanelingelenana fifamoivoizana :: Miverina ny gaborarak’ireo mpitarika sarety sy posy • AoRaha
Fanelingelenana fifamoivoizana Miverina ny gaborarak’ireo mpitarika sarety sy posy
Mitohy ny gaboraraka. Mampitaraina ny mpampiasa lalana rehetra indray ny fivezivezen’ireo sarety sy posy amin’ny ora efa voarara. Miverina manao izay tiany izy ireo ka manampy trotraka hatrany amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana. Tsikaritra fa tsy misy intsony ny fanakanana atao azy ireo fa dia mifamoivoy am-pilaminana sy amin-kahalalahana.
« Mametraka lalàna am-bava fotsiny isika fa tsy natao ho ampiharina. Tsy misy intsony ny fanakanana ireo sarety sy posy fa toa jerem-potsiny. Mandeha ny fanamboaran-dalana amin’izao fotoana izao, izay miteraka fitohanana lavareny nefa mibahan-dalana koa izy ireny », hoy Rafanomezantsoa Lalaina, mpamily.
Tsiahivina fa manomboka amin’ny 7 ora ka hatramin’ny 10 ora maraina sy amin’ny 12 ora ka hatramin’ny 2 ora tolakandro ary amin’ny 4 ora mandra-pisavan’ny fitohanan’ny fifamoivoizana no ora tsy azo ifamezivezen’ny posy sy ny sarety eto an-drenivohitra. Nohamafisina ihany koa fa tsy azon’izy ireo idirana ny eny afovoan-tanàna sy ny eny amin’ny toerana fiakarana toa an’Analakely, Anosy, Mahamasina, Ambohidahy, Ambohijatovo. Mifanohitra amin’izany anefa ny hita amin’izao fotoana izao.
Isan’ny manao antso avo amin’ireo tompon’andraikitra rehetra koa ny mpampiasa lalana amin’iny Tsarasaotra-Ivato iny, mba hijery akaiky sy handamina ny fandehanan’ny sarety eny an-toerana. Manembantsembana ny fifamoivoizana amin’iny lalana iny izy ireo. « Nampanantena ny tao amin’ny minisiteran’ny Fitaterana fa hametraka toeram-piambenan’ny polisy tety amin’ity lalana ity, ka handamina sy hanara-maso saingy mbola tsy misy hatramin’izao. Samy manjakazaka, na ny mpivarotra na ireo mpitarika sarety ka mety hiteraka lozam-pifamoivoizana », araka ny nambaran’ireo mpampiasa lalana.
Baolina lavalava – Amboaran’i Afrika :: Hifandona voalohany amin’ i Maraoka ny Makis vehivavy
Tarehimariky ny CENI – Fifidianana ben’ny tanana :: Telo amby fitopolo sy roanjato sy arivo ny isan’ireo kandidà manerana ny Nosy